Haiti: lahatsary mety mahavonjy aina · Global Voices teny Malagasy
Haiti: lahatsary mety mahavonjy aina
Voadika ny 09 Novambra 2010 1:05 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Italiano, Swahili, 한국어, 繁體中文, 简体中文, Nederlands, Español, македонски, English
Indroa nitsidika an'i Haiti hirotsaka an-tsitrapo hanao izay vitany any an-toerana ilay farmasiana vavy mipetraka any San Francisco sady mpamaham-bolongana Dr. Jan Gurley hatramin'ny nisian'ny horohorontany tamin'ny 12 Janoary. Nifanandrify tamin'ny nielezan'ny valan'aretina cholera izay nahafatesana olona an-jatony sy an'arivony nampidirina hopitaly indray hatramin'ny nipoiran'ny trangan'aretina voalohany ny 19 oktobra 2010 ny fitsidihana faharoa nataony tany. “valan'aretina mahafaty mitovitovy vaika amin'ny rivodoza ny Cholera,” hoy ny nosoratan'ny Doc Gurley (araka ny hamantarana azy ao amin'ny tontolom-bolongana):
Mety ho faty ao anatin'ny 3 ora monja ianao, sady tafala aminao avokoa tahaka ny fanehitra (diarrhée) izay mety ho ranoka rehetra tao aminao. Hitako teto Haiti tamin'ny volana febroary fa efa misy sahady teo amin'ny fiarahamonina karazana fady tsy firesaka mifandraika amin'ny fanehitra. Tsy mahagaga loatra izany rehefa mahita ny zavamisy iainana andavanandro ahitana olona an-jatony eo amin'ny fitobian'ny fiara nefa tsy ahitana toeram-pidiovana iray akory. Ary ankehitriny indray dia maro ny fanahiana fa mety ho nentin'ireo mpiasa iraisampirenena tonga hanampy ho ao Haiti indray ity valan'aretina ity. Ankoatra ny ain'olona maro dia maro efa nafoy (misy ny mitatitra ny isan'ny matin'ny cholera ho 200 ka hatramin'ny tatitra rosiana manisa azy ho 500 ), ho firy indray ny fahalalahan-tanana efa misy ankehitriny sy izay mbola ho avy mety ?
Nitady fampianarana an-tserasera mampianatra ny fitsaboana fampidiran-drano amin'ny alalan'ny vava (ORT) [karazan'ny iray sy valo araka ny fahafantaran'ny Malagasy azy] izay havelany ho an'ny Haisiana marariny sy ny mpiara-miasa aminy i Doc Gurley. Mety hahavonjy aina ny fahalalana fototra momba ny ORT satria ny ankamaroan'ireo matin'ny cholera raha ny marina dia noho tsy tsy fisian'ny rano intsony ao amin'ny tena. Ampahatsiahivin'i Doc Gurley amin'ny mpamaky azy fa na dia any Haiti aza dia fitaovana entina hampahafantarana sy hanapariahana fahalalana ny lahatsary: “Manana finday sy fandefasana somaiso ny olona any ary manana adiresy imailaka avokoa ny rehetra. Manana finday avo lenta ahafahana mijery lahatsary ny mpanampy an-tsitrapo any ary tia mitangorona sy mijery amin'ny efijery bitika, tahaka ny olona aty ny olona any.”
Rehefa tsy nahitam-bokany ny fikarohana nataony an-tserasera ankoatra ny hira an-dahatsary amin'ny fiteny Haosà iray sy ireo dokambarotra maro dia maro momba ny zava-pisotro mampatanjaka mitovy karazana amin'ny Gatorade dia nanangona ny namany vitsivitsy i Doc Gurley hanatontosa io lahatsary eo ambany io. Saiky tsy nahenoana resaka loatra izy io ka mahatonga azy ho sahaza ny firenen-drehetra , izay mampiseho ny fanaovana “iray sy valo” [iray sy efatra eto] amin'ny “fampiasana zavatra misy ao an-tanàna fadiranovana iray”, ka anatin'izany ny tavoahangy plastika sy ny kapisily:
siramamy 4 kapisily, sira 1 kapisily, rano madio 500ml na tapa-litatra = aina
7 andro izayHaiti
19 Janoary 2014Azia Atsinanana
Lavin'i Cui Jian, Kintan'ny Rock Shinoa, Ny Hihira Eo Ambany Sivana